Main oru atụmatụ na ngwa: XD ụdị mgbapụta bụ oké ọrụ slurry mgbapụta. Ebe ọ bụ na mgbapụta ahụ nwere akụkụ na-egweri ya na ihe nkwado siri ike, ọ kwesịrị ekwesị maka ịbuga abrasion siri ike, nnukwu slurry dị elu ma ọ bụ obere ịta nke slurry dị elu, enwere ike iji usoro nrụgide kachasị elu nke mgbapụta ahụ. XD ụdị mgbapụta bụ cantilever ụdị, kwụ centrifugal mgbapụta, adabara erute abrasive ma ọ bụ corrosive slurry, ọ na ọtụtụ-eji nkà mmụta banyere ígwè, ...
Ngwunye abrasion siri ike 200DXD
Ike ịzọpụta slurry mgbapụta 150YZJ
Main oru atụmatụ na ngwa: YZJ ụdị mgbapụta bụ otu ogbo, otu mmiri, cantilever kwụ centrifugal slurry mgbapụta. Mgbapụta ahụ nabatara usoro ihe omimi nke mmiri mmiri nke mmiri na-aga n'ihu na mba ụwa, dịka ụkpụrụ nke mbenata nha pere mpe, jiometrị nke na-agba egweri kwekọrọ na steeti na-ajụ, iji belata ọnọdụ dị egwu na mmetụta nke hydraulic mpaghara ahụ kpatara. ọnwụ na tinyere Cheng Shuili ọnwụ, si otú belata agba mgbanaka eyi, mma na hy ...
Energy ịzọpụta slurry mgbapụta 200YZJ
Njirimara oru na ngwa: Y - ụdị mgbapụta mmiri mmiri maka mgbapụta nke slrifry vetikal centrifugal, mikpuru n'ime mmiri mmiri ahụ, eji ebuba abrasive, irighiri irighiri, elu ịta nke slurry. Ọ dịghị mkpa akara aka ma ọ bụ mmiri mmiri, ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru ọnọdụ nke ezughi oke. Ọ na ọtụtụ-eji Metallurgy, Ngwuputa, mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, unyi, electric ike, njem, osimiri dredging, ụlọ ihe na ọchịchị engineering ...